Iza ary izahay? - DELF DALF MADAGASCAR
Ny foibe-pitantanana fanadinana, izay eo ambany fiahian’ny-SCAC-Sampana miandraikitra ny fiarahamiasa sy ny asa kolotoralin’ny Masoivoho frantsay no miandraikitra ny fitantanana ny fampandehanana ny DELF DALF eto an-toerana.
Izy no mifandray mivantana amin’ny rantsa-mangaika izay miandraikitra ny DELF DALF eran-tany, ny CIEP, izay ivon-toerana iraisam-pirenena momba ny fampianarana, mpandraharaha fitaratrin’ny Ministeran’ny fanabeazana frantsay, ny fampianarana ambony ary ny fikarohana, anisan’ny tena mpandraharaha mpiara-miasa amin’ny Ministeran’ny raharaham-bahiny frantsay.
Raha ny mikasika ny fanamarinam-pahaizana DELF DALF, ny foibem-pitantanana fanadinana,izay miorina ao amin’ny Alliance Française Antananarivo, no mandrindra ny asa ho an’ireo Alliances Françaises 27 toeram-panadinana eto Madagasikara. Manana iraka lehibe telo izy :
– manomana ary mitantana ireo fotoam-panadinana enina isan-taona ho an’ireo karazana DELF DALF rehetra ;
– manofana, mikarakara ary manaraka ny fahafahan’ireo mpanadina-mpitsara fanadinana nahazo alalana. Ny firoboroboan’ny fanamarinam-pahaizana dia tokony miankina amin’ny fifehezana tsara ny toerana misy ireo toeram-panadinana nahazo alalana, izay manana ekipa mpanadina-mpitsara ary mpanofana an’ireo mpanadina-mpitsara ireo. Madagasikara dia manana mpanadina-mpitsara 280 ny taona 2016.
– mampivelatra ary mampirisika ny fanamarinam-pahaizana sady miahy hatrany ary miantoka ny fenitrin’ny kalitao. Ny fampivelarana ny fanamarinam-pahaizana dia tafiditra indrindra indrindra ao anatin’ny dingana fanarahana ny fenitry ny zavatra atao.
Fikarakarana ny DELF DALF eto Madagasikara